Izincwadi Zamakhasimende, Isikhwama Samaphepha Esiko, Ibhokisi Lephepha Ngokwezifiso - I-SmartFortune
ISmartFortune Packaging Co Ltd ingumkhiqizi waseChina oshicilela futhi owenzela izinto ngokukhethekile ekukhiqizeni anhlobonhlobo amabhuku wokuphrinta wezincwadi, amabhokisi enziwe ngezifiso, izikhwama zamaphepha ezenziwe ngezifiso njll imikhiqizo yephepha.
Kwemboni yethu itholakala DongGuan idolobha, Isifundazwe GuangDong, China; Kuseduze kweHongKong, iShenZhen neGuangZhou, cishe ihora elilodwa kuphela ngemoto.
Sinezisebenzi ezinamakhono angaba ngu-360, futhi sisebenzisa isipiliyoni sethu seminyaka ecishe ibe ngu-25, singanikeza amakhasimende isixazululo esiguqukayo ngentengo yefektri yokuncintisana kanye nokulethwa okuphephile okusheshayo emnyango.
Sicela uxhumane nathi ngokuthola isilinganiso sakho, sizokuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ibhokisi lephepha langokwezifiso
Isikhwama sephepha ngokwezifiso
Izincwadi zebhodi le-Flap
incwadi yangokwezifiso yomsindo wezingane
phrinta incwadi yendaba yokufaka imibala
ukuphrinta incwadi yokupheka
ngokwezifiso ukusonga ibhokisi lekhadibhodi
khiqiza ibhokisi lekhadibhodi ngewindi le-PVC
ifolda yesipho esigoqekayo
khiqiza ibhokisi lesipho le-Chocolate
kraft iphepha isikhwama wholesale
khiqiza ifektri yesikhwama sokuthenga
Izinzuzo zethu eziyinhloko
Gcina izindleko zakho ngesipiliyoni seminyaka yethu engaphezu kwengu-25 kumkhakha wokuphrinta nokupakisha.
Phendula ngokushesha embuzweni wakho -Uma ufuna, kungaba amahora angama-24 aku-intanethi kuwe.
Nikeza usizo ngemidwebo yakho yobuciko yamabhuku wakho wangokwezifiso, amabhokisi enziwe ngezifiso nezikhwama zangokwezifiso.
I-QC ilawula ngokuqinile zonke izinyathelo ngesikhathi sokukhiqizwa ngobuningi kwekhwalithi enhle
Hlangana nosuku lokulethwa oludingekayo uma amaklayenti efuna
Impendulo esheshayo yemibuzo ngemuva kwezinkinga noma izinkinga uma zikhona
Iziqukathi noma ukupakisha, nemisebenzi yokuhlobisa impahla. Ukupakisha ukuqhubeka kwenqubo yokukhiqizwa kwempahla kwinqubo yokusakazwa, futhi kuyisimo esibalulekile sezimpahla zokungena emkhakheni wokusakazwa nokusetshenziswa. Indima yokupakisha inakho okulandelayo ...
Yiziphi izinqubomgomo zaseChina zokuxhasa ukuthuthukiswa okunamandla komkhakha wokuphrinta nokupakisha? Njengoba imboni yokuphrinta nokupakisha inekhono eliqinile lokumunca abasebenzi, futhi nezinga lokungcola kwemvelo liphansi uma kuqhathaniswa, ohulumeni bamazwe nabasekhaya bane-st ...
Wazi kangakanani ngamazinga wokuvikelwa kwemvelo okuphrintwa kwezincwadi zezingane?
Imakethe yezincwadi zokuphrinta izingane zaseChina iya ngokuya ichuma njengoba abazali benaka kakhulu ukufunda futhi abazali abaningi banake kakhulu ukufunda. Njalo lapho kukhuthazwa isitolo esiku-inthanethi, imininingwane yokuthengisa yezincwadi zezingane ihlala imangalisa impela. E ...
Imakethe yezincwadi zezingane inamakhono amangakanani?
-Kusukela eSmartFortune Sina Education ikhiphe i- "White Paper on Chinese Chinese Education Consumption" (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi yi "White Paper") ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. "IPhepha Elimhlophe" likhombisa ukuthi inani lokusetshenziswa kwemfundo yasekhaya liyaqhubeka noku ...